ဆူမိုနပန်းသမားတွေဟာ တကယ်ရော သန်မာကြရဲ့လား? အဆီတွေသာမကဘဲ ထူးခြားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံ။ - JAPO Japanese News
ဆူမိုနပန်းသမားတွေဟာ တကယ်ရော သန်မာကြရဲ့လား? အဆီတွေသာမကဘဲ ထူးခြားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံ။
ကြာ 13 Jan 2022, 15:28 ညနေ
စာဖတ်သူတို့ တီဗွီထဲမှာဖြစ်ဖြစ် အပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ဖူးကြပါသလား?
ဝတဲ့လူအချင်းချင်း ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တွန်းတိုက်ကြတဲ့ပုံဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ကြည့်ရင် နည်းနည်းထူးထူးဆန်းဖြစ်နေမယ့် ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး တော်တော်များများ မေးချင်ကြမယ်လို့ထင်တယ်။
“ ဒီလူတွေ၊ တကယ်ရော သန်မာကြလို့လား?”
ဆူမိုကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ SUMO Wrestler တွေကို 力士（りきし）လို့ခေါ်ပါတယ်။
幕内力士（まくうちりきし）လို့ခေါ်တဲ့ အဓိကအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ပျှမ်းမျှကိုယ်အလေးချိန်ဟာ ၁၆၆.၂ ကီလိုဂရမ်ရှိပြီး၊ အများဆုံးကိုယ်အလေးအချိန်ကတော့ ၂၉၂.၆ ကီလိုဂရမ် ရှိကြပါတယ်။ သာမန်ဂျပန်လူမျိုးအတွက်တော့ အတော်လေးအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အလေးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအပြင်တီဗွီမှာကြည့်လိုက်ရင် ပျော့ပြောင်းနေပုံရတဲ့ဝမ်းဗိုက်အဆီတွေ… ။ ဒါဟာ အဆီတွေချည်းပဲမဟုတ်လား? ဆိုပြီး မေးချင်တဲ့လူရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဆူမိုနပန်းသမားတွေဟာ အဆီတွေနဲ့ဝနေရသလဲလို့ဆိုရင်၊ ဆူမိုဟာ ကိုယ်အလေးချိန်အလိုက် အဆင့်မသတ်မှတ်တဲ့ “ openweight” တစ်ခုဖြစ်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သဘောကျမယ်ဆို 80kg ရှိတဲ့လူက 200kg ရှိတဲ့လူနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ အားကစားလောကဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိုယ်အလေးချိန်ကွာခြားမှုဟာ အနိုင်ရချေမှာတော့ ကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။
80kg ရှိတဲ့လူက 200kg ရှိတဲ့လူကို ကိုင်မြှောက်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။
နောက်ထပ်ပြောရရင်၊ 80kg ရှိတဲ့လူကို 200kg ရှိတဲ့လူက လာတိုက်ခိုက်လာခဲ့ရင်၊ ယဉ်မတော်တဆမှုတွေလိုပဲ အဝေးကိုလွှင့်စင်သွားနိုင်တာကြောင့် ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဒီထက်ပိုပြီး မိုက်တာကတော့ အဆီအောက်မှာ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ ကြွက်သားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကနပန်းသမားရဲ့ ပျှမ်းမျှအဆီပမာဏဟာ ၃၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။
သာမန်အမျိုးသားတစ်ယောက်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အဆီရာခိုင်နှုန်းက ၁၁ ကနေ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာ ရှိတာကြောင့်၊ အဲ့ဒီထက်အနည်းငယ်ပိုနေပေမဲ့၊ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ အလေးချိန်ကိုပါထည့်တွက်ကြည့်ရင်၊ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ကြွက်သားအလေးချိန်ဟာ အဆီအောက်မှာ ပုန်းနေကြောင်းကို သိရပါတယ်။ အဆီတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်၊ ကြွက်သားအလေးချိန်မှာ 100kg ကျန်တဲ့လူတွေတောင်ကျန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကာယဗလမောင်တွေတောင် မယှဉ်နိုင်တဲ့ ကြွက်သားထုထည်ပမာဏ ရှိကြပါတယ်။
အဲ့ဒီလို ဆူမိုကစားသမားတွေထဲမှာ အလွန်သန်မာခဲ့သူတစ်ဦးရှိပါတယ်။ သူကတော့
ဓါတ်ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း အဆီထက်ကြွက်သားတွေကိုမြင်နေရတဲ့ ဆူမိုကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်မှာ 126kg ရှိပေမဲ့၊ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အဆီပမာဏကတော့ ၁၀.၃ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါတယ်။
သာမန်ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ ယှဉ်ပြီးကြည့်ရင်တောင်၊ အဆီနည်းလွန်းပြီး ပိန်လွန်းတဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်။
သူဟာ ခန္ဓာကိုယ်သေးတယ် နောက်ပြီး ပခုံးလည်းလွယ်လွယ်ကျိုးနိုင်မယ် ဆိုတဲ့ပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ်။
ကြွက်သားတွေကို သေသေချာချာ တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်၊ လွယ်လွယ်နဲ့ပခုံးမကျိုးဖို့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ကို ချပ်ဝတ်တန်ဆာလို့ အားဖြည့်လိုက်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲသမိုင်းအရ အောင်ပွဲပေါင်း ၁၀၄၅ ပွဲအနိုင်ရရှိပြီး၊ ၄၃၇ ပွဲကျရှုံးတယ်။
ဆုရမှတ်တမ်း ၃၁ ကြိမ်ရှိပြီး၊ ဆူမိုလောကကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဆူမိုဘုရင်တစ်ဆူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်သေးသေးလေးနဲ့ လူကောင်ထွားထွား ပြိုင်ဖက်ကို ကိုင်ပေါက်ခဲ့တဲ့ပုံစံဟာ ပရိသတ်အား အလိုလိုကြည်နူးမိစေပြီး၊ ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးကို တက်ကြွသွားစေခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုဆူမိုကစားသမားဟာ ထူးဆန်းမှုတွေထဲက ထူးဆန်းမှုတစ်ခုပါ…
ဆူမိုကစားသမားအတွက်တော့ အရေးကြီးဆုံးအချက်က ကိုယ်အလေးချိန်ပဲ ။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်များတိုင်းလည်း အဆင်ပြေတာမဟုတ်၊ အလေးချိန်ကိုအသုံးချပြီး ခွန်အားနဲ့လှုပ်ရှားမယ့် ကြွက်သားကလည်း လိုအပ်ပြန်ပါတယ်။ ဆူမိုကစားသမားဟာ ဒီလိုဟန်ချက်ညီမယ်ဆို ထိပ်တန်းအဆင့်ကို ဝင်တာပါပဲ..
စာဖတ်သူတို့လည်း ဆူမိုကစားသမားနဲ့တွေ့ခဲ့ရင် လုံးဝရန်မဖြစ်ကြနဲ့နော်… အသတ်ခံရလိမ့်မယ်..(ရယ်လျက်)
နောက်ပြီး အနီးမှာရှိတဲ့ လူဝကြီးတွေကိုလည်း လိုက်မစကြပါနဲ့။
သူတို့ခွန်အားဟာ အဆီတွေကြောင့်သာ မမြင်ရတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။